Global Voices teny Malagasy » Belo Monte, Herintaona Aty Aoriana: Ny Fiantraikan’ny Tohodrano Amin’ireo Mponina manamorona Ny Renirano sy ireo Vazimba Teratany · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 27 Novambra 2016 6:38 GMT 1	 · Mpanoratra ISA Nandika (fr) i Emmanuelle Marmion, miora
Sokajy: Amerika Latina, Brezila, Fampandrosoana, Mediam-bahoaka, Teratany, Tontolo_iainana, Zon'olombelona
Raimunda Gomes da Silva nonina tao amin'ny iray amin'ireo Nosin'i Xingu, tototry ny sinibe voatrolombelona. Sary: Isabel Harari / ISA
[Ny rohy rehetra dia amin'ny teny Portiogey]
Ity tatitr'i Isabel Harary, navoaka voalohany tao amin'ny tranonkalan'ny Instituto Socioambiental ity dia naverina navoaka atoamin'ny Global Voices ho fandraisana anjara amin'ny fifampizarana vontoaty..
Nakatona tamin'ny novambra 2015 ireo vavaranon'i Belo Monte, orinasa faharoa lehibe indrindra mpamokatra herinaratra avy amin'ny rano ao Brezila ary tohodrano fahaefatra lehibe indrindra erantany, mba hanombohana ny famenoana ireo siniben'ny tohadrano any Amazonia – nanova fehizay ny fiainan'ireo vazimba teratany ary ireo manodidina an'i Belo Monte. Ny fahasarotan'ny fivezivezena eo amin'ny renirano, ny fanjavonan'ny toeram-panjonoana, ny fitomboan'ny valan'aretina ary ny fahafatesan'ny trondro no santionany amin'ny fiantraikany amin'ireo mponina manodidina.
“Tsy azo atao intsony ny miaina amin'ny Rio Xingu ankehitriny. Niaina tsara ny olona, ary ankehitriny mijaly izy ireo, tsy manana fianana mendrika izany anarana izany intsony”, hoy i Raimonda Gomes Da Silva maneho hevitra tamin'ny fitetezany ireo vaton'i Volta Grande, ampahan'i Rio Xingu tratry ny vokatra maharitry ny tohodrano.
Nipetraka niaraka tamin'ny vadiny João tao amin'ny iray amin'ny nosin'i Xingu izay tototry ny tohodrano voatrolombelona nataon'ny ozinina i Raimonda. Samy nivelona tamin'ny jono sy fambolena izy roa. Ankehitriny, mipetraka aminà trano any amin'ny faritr'i Airton Senna II any Altamira izy, tanàna misy mponina 100 000 – iray amin'ireo lehibe indrindra manodidina ny ozinina.
Hatramin'ny nanidiana ireo vavarano, manodidina ny valopolo isan-jaton'ny hadirin'ny Xingu no navily tamin'ny làlany voajanahary mba ho any amin'ny fantsona voatrolombelona mitondra hatrany amin'ny sinibe. Ny habetsahan'ny rano dia tsy handalo intsony hamaky an'i Volta Grande, ampahan'i Rio Xingu manakaiky ny zato kilometatra mamakivaky Faritany indizena roa, Arara da Volta Grande  sy Paquiçamba , izay an'ny vahoaka Arara sy Juruna. Fianakaviana an-jatony no monina eto.
Nosy may sy tsy misy hazo intsony, difotry ny farihy voatrolombelona amin'ny ampahany. Sary: Isabel Harary / ISA
“Ny tena olana lehibe dia ny tsy fahampian-drano. Tsy mitondra na inona na inona ho anay ny tondradrano, ary mitera-doza ho an'ny fiainanay ny tsy fahampiana. Ho loza no ateraky ny fahatondrahan'ny rano, hitondra olana maro toy ny antsanga, miteraka fahafatesan'ny trondro sy ny hazo izay mety ho tototra. Na ny mifanohitra amin'izay, na dia misy rano kely aza, mety tsy ho ampy”, hoy i Raimuda.
Manana tetikasa izy ankehitriny ho an'ny fonenany vaovao, izay antsoiny hoe “tany nampanantenaina”: tany iray 350 metatra miala ny renirano, azony vokatry ny onitry ny Norte Energia. Lavitry ny renirano, fa tsy tena lavitra. “Ho eo aho, eo anoloany, hijery… Tsy hahita azy mitsiky aho na ho afaka, fa ny mifanohitra amin'izay, hijery azy miala aina, nefa tiako ho fantany fa tsy nanadino azy aho”.
Tsy misy renirano ary tsy misy trondro
Teo anelanelan'ny febroary sy aprily 2016, nanome sazy mitentina 35.3 tapitrisa reals  (manodidina ny 9.5 tapitrisa Euro) an'i Norte Energia noho ny fahafatesan'ny trondro 16,2 taonina nandritra ny famenoana ilay sinibe izay naharitra 3 volana ny Ibama.
Sazy telo nifanesy no nomena – 27,5 tapitrisa reals noho ny fahafatesan'ny trondro, 7,5 tapitrisa noho ny tsy fanajana ny iray amin'ny fepetran'ny fanomezan-dàlana ary 510.000 reals noho ny fanomezana vaovao tsy marina tamin'ny fandraisana mpiasa miandraikitra ny fanavotana ireo trondro. Ny sazy 27,5 tapitrisa reals no anisan'ny sazy lehibe indrindra nomena hatramin'ny fanombohan'ny fanorenana ny Belo Monte.
Ny Loricariidae, trondro tena malaza ao amin'ny faritra, jamba sy rotiky ny kantsetsitra. Sary: Tokjell Leira / ISA
Tsy ny fahafatesan'ny trondro maro ihany no olana sedrain'ny mponin'i Xingu. Hatramin'ny fanombohan'ny fanorenana ny Belo Monte, ireo vazimba teratany any amin'ny faritra dia nitatitra ny fahafaham-baràka – ary indraindray ny fahalaniana tamingana – manjo ireo toeram-panjonoana manan-danja.
Noho ny fanakanana tanteraka ny ony sy ny fihenan'ny fikorianan'i Xingu, tonga goavana be ny fiantraikany. “Mila ora iray ny olona vao tonga any amin'ny toeram-panjonoana, amin'izao fotoana izao, lasa in-droa avo heny. Matetika, tsy tafiditra amin'ny toerana sasany ny olona satria nihena be ny rano, tsy afaka miampita intsony”, hoy Natanael Juruna, vazimba teratany iray, manamafy.
Ny jono no tena asa fiveloman'ny Juruna, araka ny Atlas-n'ny Fiantraikan'ny Tohodranon'ni Belo Monte.  Ny vokatry ny fanadihadiana fanarahamaso tsy miankina nataon'ireo Juruna, niarahana niasa tamin'ny ISA sy ny Oniversite Federalin'i Pará, dia manipika fa ny famokarana trondro vitan'ny Juruna isan-taona dia 4.469 kilao. Ny 98%-n'io vokatra io dia natokana ho an'ny fanjifany manokana raha amidy kosa ny 2% sisa. Ny trondro no manome ny 55%-n'ny sakafon’ izy ireo.
Lasa sarotra ny fifamoivoizana amin'ny renirano, noho ny fidinan'ny rano mikoriana. Sary: Isabel Harari / ISA
Ny fisamborana ny trondro dia mifandray amin'ny tsingerin'ny tondradrano sy ny fikorian'ny rano. Ny Pacu su ny Brycon, ohatra, dia mihinana voankazo avy amin'ireo faritra tondraka, faritra izay nijanona tsy nisy intsony noho ny fiovaovan'ny fikorian'ny renirano.
“Tsy afaka miaina tsy misy trondro izahay. Nivelona tamin'ny jono foana ny olona aty amin'ny faritray. Malahelo aho rehefa maheno olona miteny fa voaozona hanjavona ny trondro. Nivelona tamin'ny jono izahay, tamin'ny renirano, izany no antony maha-Yudja anay [anarana hafa hanondroana ny Juruna], izay midika hoe “tompon'ny renirano”; ary mbola velona izahay noho ny reninrao, izay midika zava-dehibe ho anay. Raha mbola misy ny Xingu, hiady izahay. Ary hatramin'ny farany izany. Raha misy maty, miara-maty aminy izahay”, hoy ny fanazavan'i Gilliard Juruna, lehiben'ny tanàna Miratu, any amin'ny faritry ny vazimba teratany Paquiçamba.
Nitombo be ny isan'ny moka hatramin'ny nanorenana ilay orinasa ary nanohintohina ny asa fanjonoana, ny fanangonana ny vokatra an'ala sy volin'ny mponina manodidina ary ireo vazimba teratany.
Bel Juruna, lehiben'ny tanàna Miratu koa, dia sahiran-tsaina noho ny habetsahan'ny fanafody famonoana moka ampiasain'ny mponina isanandro ao amin'ny faritra: “Manomboka izao, tsy maintsy mitondra famonoana moka ny mponina, tsy maintsy mifoka poizina izahay, nefa izay ihany no fomba iray hahavoatsimbina anay tsy hohanin'ny bibikely, na dia ao an-tranonay aza. Mety hanapoizina ny zanakay izahay, ny olona, ary tsy vao omaly io olana io”.
Rafitra famadihan-toerana ireo sambokely. Noraketin'ny mpiasan'ny Norte Energia an-tsary ny fiampitana. Sary: Isabel Harary / ISA
Voadonan'ny fidinan'ny fikorian'ny Xingu koa ny fivezivezena ambony rano. Eo akaikin'ny ampahan'ny renirano, mila midina ny sambo izahay ary mampiasa ny fitaterana an-tanety nomen'ny Norte Energia. “Kivy tanteraka ny olona, fikorontanana ho anay ny tsy maintsy handalovan ‘ny sambonay amin'izany. Reniranonay io, malalaka izahay ny hivezivezy eo”, hoy Bel manamafy.
Nanome andiam-panontaniana ho an'ireo izay mita io fiampitana io ny mpiasan'ny Norte Energia: fanampin'anarana, anarana, laharan-taroby, adiresy, miakatra sa tsia ao amin'ny sambo ary, arak'i Bel, hatramin'ny vola miditra aminy. “Nahoana no anontaniana anay ny vola miditra aminay? Ankehitriny, tokony hanome fahafahampo ny Norte Energia ve ny karamanay?” hoy izy.
Tsy fisian'ny fifanakalozan-kevitra
Iray amin'ireo fepetra fanomezandalana ho an'ny fametrahana an'i Belo Monte ny nandidiana ny Norte Energia hametraka, herintaona alohan'ny hanakanana ny renirano, tolokevitra fanarahana maso, sy fanalefahana sy onitra fanonerana ny fiantraikany amin'ireo vondrom-piarahamonina voakasika, ny mponina sy ireo vazimba teratany. Hatramin'izao, naseho nyi Ibama fotsiny ihany ireny fanazavana izany, izay nanome ilay fahazoandalana.
Ny fanarahana maso ny kalitaon'ny rano, ohatra, dia ataon'ny orinasa nomen'ny Norte Energia alalana. Ny sasany amin'ireo vazimba teratany dia nandray anjara tamin'ny fanangonana ny vaovao tany amin'ireo orinasa mpiantoka asa, saingy tsy nahita vokany.
Iray amin'ireo lakana dimy izay mamakivaky ny Volta Grande do Xingu nandritry ny Canoada iray. Sary : Marcelo Salazar ISA
Niezaka hisarika ny saina amin'ny zava-manahirana mahazo ny olona sy ny fiarahamonina hatramin'ny nanorenana ny orinasa ny Canoada Bye Bye Xingu; hetsika fitolomana notarihin'ny Fikambanan'ny Vazimba Teratany Yudja Miratu Volta Grande do Xingu (Aymix) sy ny ISA.
Ny andiany fahatelo amin'ny Canoada dia nitranga teo anelanelan'ny faha-3 sy faha-9 Septambra, izany hoe taorian'ny fanidiana ny vavaranon'i Xingu. Tsy hoe tsy misy vokany ny fiovana. Noho ny fahamainan'ny renirano, lasa sarotra kokoa ny famakivakiana ireo roa ambin'ny folo amby zato kilometatra, raha voaravaka nosy tototra anaty rano, karankaina ary trondro marary ilay tontolo manaitra.
“Tena traikefa tsy manam-paharoa ny miaina miaraka amin'ireo vazimba teratany sy ny mponina ny taorian'ny fahatongavan'ilay orinasa, mba hahita ny hatsaran-tarehy, fa koa ny fanaintainan'ny faritra. Ireo izay nandray anjara tamin'ny Canoada dia mihaino ireo mponina voakasika, mahatsapa ny kaikitry ny moka, mahita ny trondro sy ny hazo maty, ary resy lahatra fa ny lasitra fampandrosoana ny tanintsika dia tsy tokony ho voafaritry ny fanorenana tohodrano toy ny an'i Belo Monte”, hoy i Marcelo Salazar an'ny ISA manamafy.
Ankoatra izay, traikefa iray nanampy ny Indiana hieriteritra safidy hafa ara-tsosialy sy toekarena ho an'ny fiarahamonina miantehitra amin'ny jono sy ny fivarotana trondro koa ny Canoada. Afaka mitantana ny vola miditra aminy amin'ny alalan'ny asa toy ny mpitaridia, mpampanofa lakana, na amin'ny alalan'ny fivarotana ireo vokatry ny famboleny sy ny asa tanana ireo vazimba teratany sy mponina manamorona ny renirano.
Hanao andianà fitiliana mba hamaritana ny habetsaky ny rano ilaina ho an'ny famokarana angovo sy izay hilaina ao amin'ny Volta Grande ny Norte Energia amin'ny taona hoavy. Izany hoe hatramin'ny 2019, taona izay hanombohan'ny fiasan'ireo milina mpanodina, rehefa “hamoha sy hanidy ny paompin'ny tohodrano ilay nmena alàlana, araka ny fepetra napetraky ny Sampan-draharaha Nasiolany misahana ny Rano (ANA) sy ny Ibama.
Nanaraka ny fiovan'ny renirano sy ny fomba fiainan'ny olona manamorona ny renirano ireo mpandray anjara amin'ny canoada. Sary: Roberta Simonetti / Isa
“Ny zavatra fantatsika dia hotazonina ny fikorianana kely indrindra ho an'ny fahafanan'ny toerana miaina, ary ny fiainana dia mila io fikorianana ambany indrindra io. Anisan'ny andrana lehibe iarahana amin'ny olombelona sy ny zavaboary ny mizaha toetra ny fiainan'ny natiora sy ny olona izay monina ao amin'io faritra io mba hahitana izay mety. Izy io dia toeram-panandramana mahatahotra izay miforona miaraka amin'ireo olona izay miaina ao amin'ny faritra,” hoy i Marcelo Salazar avy amin'ny ISA nampitandrina.
Ny orinasa mpitrandraka harena ankibon'ny tany, loza mitatao vaovao ho an'ny Volta Grande
Tokony hitsangana any Volta Grande ny toeram-pitrandrahana volamena lehibe indrindra sy manao tafo lanitra any Brezila, vao mainka hampitombo ny zava-misy any Xingu. Nanomboka tamin'ny 2008, nanao fikarohana tany amin'ny faritra ny vondrona Kanadiana Belo Sun Mineração, ary nanombana fa volamena eninjato taonina no tokony ho azo mandritra ny roa ambin'ny folo taona manaraka. Na dia mbola tsy misy vinavinan'asa nolazaina momba ny fanombohan'ny asa aza, efa manana fanomezandalana mialoha navoakan'ny Sekretarià misahana ny Tontolo iainana ao amin'ny fanjakan'i Pará sahady ilay tetikasa.
Ao amin'ny tanànan'ny Senatera José Porfirio, akaikin'i Vila da Ressaca, no misy ilay toeram-pitrandrahana izay misy fianakaviana telonjato miankina amin'ny fambolena, ny jono ary ny fanitàrana ny asa tanana. Raha manomboka ny asa, fianakaviana telonjato no tsy maintsy hafindra.
Tamin'ny 2014, nahanton'ny fitsarana federaly ny fanomezan-dàlana ho an'ny harena ankibon'ny tany mandra-panomen'ny Belo Sun ny fanadihadiana momba ny fiantraikan'ny tetikasa amin'ireo vazimba teratany. Nahavita nanatsimbadika ny fanapahankevitra ny orinasa, nefa nangatahan'ny Indiana ny mba hakàna hevitra mialoha ny handrosoan'ny asa . Nangatahana ihany koa ny fanavaozam-baovao momba ny Fanadihadiana ny fiantraikany amin'ny Tontolo Iainana (EIA-Rima), mba hieritreretan'izy ireo ny fihandronan'ny loza mifandray amin'ny orinasa ao Belo Monte, izay tsy navoitra velively tao anatin'ireo fanadihadiana teo aloha.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/11/27/92251/
 navoaka voalohany tao amin'ny tranonkalan'ny Instituto Socioambiental : https://medium.com/@socioambiental/belo-monte-o-que-fizeram-de-n%C3%B3s-37c4c90b4805#.gak4u2820
 35.3 tapitrisa reals: http://www.ibama.gov.br/publicadas/ibama-multa-norte-energia-em-r-35-milhoes-por-mortandade-de-peixes-em-belo-monte
 Atlas-n'ny Fiantraikan'ny Tohodranon'ni Belo Monte.: https://www.socioambiental.org/sites/blog.socioambiental.org/files/nsa/arquivos/atlas-pesca-bm.pdf